Wararka Maanta: Khamiis, Aug 9 , 2012-Guddiga Farsamada ee xulista Xildhibaannada Baarlamaanka oo sheegay in Berri ay ku dhawaaqayaan Xildhibaanada cusub
Xarunta ay guddiga farsamada iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo ku taalla meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa buuq iyo sawaxan fara badan, iyadoo halkaas ku sugan yihiin xubno badan oo doonaya inay ka mid noqdaan xildhibaannada cusub ee dalka oo tiradoodu tahay 275-xubnood.
Wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in guddiga ay gacanta ku hayaan 184 xubnood oo ka mid ah xildhibaanada soo socda, iyadoo mas'uuliyiinta guddiga ay sheegeen in tirada ay hayaan ay berri sheegi doonaan.
"Haddii tirada xildhibaannada baarlamanaka ay noqoto inta aan haynno oo keliya, waa lagu dhawaaqayaa howsha baarlamaanku waa billaabanaysaa, waayo waa tiro ku filan inay howsha waddo," ayuu yiri mid ka mid ah guddiga farsmada oo diiday inuu magaciisa sheego.
Ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ilaalo xooggan ka haya goobta ay ku sugan yihiin labadan guddi, waxaana uu hadalkoosan kusoo beegmayaa iyadoo beeluhu ay aad uga biyo diiddan yihiin sida xildhibaannada lagu soo xulay.
Madaxda dowladda KMG ah ayaa waxay iska fogeeyeen inay faragelin ku hayaan guddiga xulista xildhibaannada cusub, iyadoo xubno guddiga ka tirsan ay sheegeen in lagu hayo faragelinno kaga imaanaya dhinaca madaxda dowladda KMG ah oo aysan u madax-bannaaneyn howshooda.